Jesu Anoporesa Musikana Ane Dhimoni Uye Murume Matsi | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Alur Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MATEU 15:21-31 MAKO 7:24-37
JESU ANOPORESA MWANASIKANA WOMUMWE MUKADZI WOKUFENIKIYA
ANOPORESA MURUME MATSI UYE MBEVEVE
Afumura tsika dzevaFarisi dzaingoita kuti zvinhu zviende nepavanoda ivo, Jesu anobva muKapenaume nevadzidzi vake. Anonanga kunharaunda yeTire neSidhoni iri kuFenikiya, makiromita akawanda kuchamhembe kwakadziva kumadokero.
Jesu anowana imba yokugara asi haadi kuti vanhu vazive kuti ndipo paari. Asi hazvitori nguva zvisati zvazivikanwa. Mumwe mukadzi werudzi rwechiGiriki akazvarirwa munzvimbo ino anowana Jesu otanga kumuteterera achiti: “Ndinzwirei ngoni, Ishe, Mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu akabatwa kwazvo nedhimoni.”—Mateu 15:22; Mako 7:26.
Papera kanguva, vadzidzi vake vanomukurudzira kuti: “Mudzingei; nokuti anoramba achishevedzera ari shure kwedu.” Achivapindura, Jesu anotsanangura chikonzero nei aramba akanyarara achiti: “Handina kutumwa kuna ani naani kunze kwokumakwai akarasika eimba yaIsraeri.” Kunyange zvakadaro mukadzi uyu haanyarari. Anofamba achienda kuna Jesu opfugama achiteterera achiti: “Ishe, ndibatsirei!”—Mateu 15:23-25.
Zvimwe achida kuona kutenda kune mukadzi uyu, Jesu anoshandisa matauriro anoita vaJudha vachishora mamwe marudzi achiti: “Hazvina kunaka kutora chingwa chevana wochikandira imbwa duku.” (Mateu 15:26) Kunyange zvazvo vaJudha vaiona vanhu veMamwe Marudzi sembwa, Jesu anoshandisa shoko rokuti “imbwa duku,” kana kuti mbwanana, kuti asabva aita seari kuvashora sezvinoita vaJudha. Chiso chake uye inzwi rake zvinofanira kunge zvichiratidzawo madiro aanoita vanhu vasiri vaJudha.
Pane kuti agumbuke, mukadzi uyu anozvininipisa ovakira mhinduro yake pamaonerwo iwayo avanoitwa nevaJudha achiti: “Hungu, Ishe; asi chokwadi imbwa duku dzinodya mafufu anowa patafura ravanatenzi vadzo.” Jesu anoona kuti mukadzi uyu ane mwoyo wakanaka oti: “Haiwa iwe mukadzi, kutenda kwako kukuru; ngazviitike kwauri sezvaunoda.” (Mateu 15:27, 28) Uye izvi ndizvo zvinobva zvaitika kunyange musikana wacho asiri ipapo! Mukadzi uyu paanodzokera kumba, anowana mwanasikana wake akarara pamubhedha, apora, “dhimoni rabuda”!—Mako 7:30.
Jesu nevadzidzi vake vanobva munharaunda yeFenikiya voyambuka Rwizi rwaJodhani, zvichida nechekumusoro kwarwo kuchamhembe kweGungwa reGarireya. Vanobva vapinda munharaunda yeDhekaporisi. Vari ikoko, vanokwira gomo asi mhomho yevanhu inovawana. Vanomuunzira vanhu vakaremara, mapofu, uye zvimumumu. Vanoisa varwere ava pedyo netsoka dzaJesu, uye anovaporesa. Vanhu vanoshamiswa neizvi zvokuti vanorumbidza Mwari waIsraeri.
Pane mumwe murume matsi uye anonetseka kutaura anoporeswa naJesu zvakasiyana nemaporesero aari kuita vamwe. Unogona kufungidzira kuti murume uyu ari kunzwa sei pavanhu vakawanda kudai. Zvichida achiona kutya kuri kuita murume uyu, Jesu anomutora omubvisa pane vanhu. Pavanenge vava voga, Jesu anomuratidza zvaava kuda kumuitira. Anoisa minwe yake munzeve dzemurume uyu uye pashure pekupfira anobata rurimi rwake. Achitarira kudenga, Jesu anotaura shoko rechiHebheru rinoreva kuti “Vhurika.” Nzeve dzemurume uyu dzinobva dzavhurika, uye anokwanisa kutaura zvakanaka. Jesu haadi kuti izvi zvizivikanwe, achida kuti vanhu vatende maari nekuda kwezvavanenge vazvionera voga uye vazvinzwira.—Mako 7:32-36.
Simba raJesu rokuita zvishamiso rinoita kuti vanhu vari kuona zvaari kuita ‘vashamiswe zvokushamiswa zviya.’ Vanoti: “Aita zvinhu zvose zvakanaka. Anoita kuti kunyange matsi dzinzwe uye vasingatauri vataure.”—Mako 7:37.
Nei Jesu asingaporesi mwanasikana wemumwe mukadzi wekuFenikiya pakarepo?
Jesu nevadzidzi vake pavanobva kuFenikiya vanoenda kupi?
Jesu anoratidza sei tsiye nyoro nemabatiro aanoita mumwe murume matsi uye mbeveve?
Maitiro aiita Jesu zvishamiso, airatidza kuti munhu akaita sei?